पूर्वराजाको तिर्थाटन : स्वर्ग कि सत्ताका लागि ? - Dainik Nepal
पूर्वराजाको तिर्थाटन : स्वर्ग कि सत्ताका लागि ?
निर्मल भट्टराई २०७५ चैत २८ गते १५:४८
नेपालियन बोनापार्ट फ्रान्सको सम्राट भएपछि पेरिसमा उनको समर्थनमा एउटा ठूलो जनसभा आयोजना गरिएको थियो । जनताको अपार उपस्थिति देखेपछि नेपालियनको एक सहयोगीले अत्यन्त गदगदहुदै भनेछ, “हजुर अति नै लोकप्रिय होईबक्सिन्छ । हजुरको समर्थनमा आज लाखौं मानिस सडकमा आए ।”
सहयोगीको अपेक्षाको ठीक विपरीत नेपोलियनले उसलाई गाली गर्दै भने,“भाग उल्ल,ु मलाई मारेर यो चोकमा कसैले झुण्ड्यायो भने यसको दोब्बर मानिस आउँछन् !”
छ दशक संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलगायतका उपलब्धिबाट जनता अघाई सके ? जनताको मतबाट बनेको शक्तिशाली सरकार र त्यसले हासिल गरेका अल्पकालीन दीर्घकालीन उपलब्धिहरु सबै औचित्यहीन भईसके ? स्थीर सरकारको माध्यमद्वारा समृद्धि प्राप्त गर्ने भन्दा अस्थीरता बनाएर देशलाई शक्ति केन्द्रको खेल मैदान भएको टुलुटुलु हेर्नु मात्र हामी नेपालीको नियति हो ? के २०१५ सालमा
मान्छेलाई बुढेसकाल चढ्दै गएपछि कसरी स्वर्ग पुगिएला भन्ने चिन्ताले सताउँछ भनिन्छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले स्वर्ग प्राप्तिको लागि गरेको मन्दिर दर्शनलाई सत्ता प्राप्तिको आन्दोलन बुझ्ने मुठ्ठिभर शहरिया जमातको पछि लागेर कहीं कतै पुगिदैन
बनेको दुईतिहाईको कांग्रेसी सरकार अपदस्त गर्ने बाबु महेन्द्रको जत्तिकै तागत ज्ञानेन्द्रसँग छ ?
उल्लिखित तमाम प्रश्नको उत्तर “होइन र छैन”भन्ने आउँछ ।
मान्छेलाई बुढेसकाल चढ्दै गएपछि कसरी स्वर्ग पुगिएला भन्ने चिन्ताले सताउँछ भनिन्छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले स्वर्ग प्राप्तिको लागि गरेको मन्दिर दर्शनलाई सत्ता प्राप्तिको आन्दोलन बुझ्ने मुठ्ठिभर शहरिया जमातको पछि लागेर कहीं कतै पुगिदैन । जनताले मतदानबाट धुलो चटाएको पूर्वपञ्चहरुको विभिन्न समूहले गरिरहेका र गर्ने भनिएका आन्दोलनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधारलाई हल्लाउन सक्दैनन् ।
राजतन्त्रलाई फर्काउने उदेश्यले हिन्दु धर्मको मुद्धा संगसंगै जोडेर उछालिदैछ । तर ध्रुव सत्य त यो हो– अब कोही नेपाली हिन्दु “विष्णुको अवतार”बाट शासित हुन चाहदैनन् । यो चरणबाट नेपाल धेरै अगाडि बढिसकेको छ ।
उग्र दक्षिणपन्थी शक्ति र उग्र बामपन्थीको एउटा साझा अजेण्डा छ । त्यो हो —जनताले प्राप्त गरेका लोकतान्त्रिक अधिकारलाई ध्वस्त पार्नु ।
सरकारका सानातिना कमीकमजोरीलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको असफलतासँग जोडेर हेर्ने तरिका कतैबाट घरमा मुसो पस्यो भने घरै लडाउनु पर्छ भन्नु जस्तै हो । त्यसकारण अहिल्यै राजतन्त्र फर्कने यति ठूला तर्क र अनुमान भद्दा मजाक मात्र हुनेछ किनभने पूर्वराजाको मन्दिर यात्राको वर्णन उनी फर्केर नागार्जुन दरवार छिरेको दिन सकिने छ ।
हम्रोमा अर्को पनि चलन छ , चीलको डर देखाएर चल्ला टिप्ने । राजतन्त्र फर्कने हौवा पिटाएर कसको के स्वार्थ पूरा गर्नुछ अहिले प्रष्ट तस्विर देखिएको छैन ।